Gịnị Ka Sakura Pụtara? | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulGịnị Ka Sakura Pụtara?
Gịnị Ka Sakura Pụtara?
21 / 05 / 2020 34 Istanbul, General, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, OGBU NIILE, Turkey
Kedu ihe sakura pụtara?
Taa, Başakşehir Çam na Hospitallọ Ọgwụ Sakura City batara n'ike zuru oke na ntinye nke Onye isi ala Recep Tayyip Erdoğan na Prime Minista Japan Shinzo Abe. Hospitallọ ọgwụ, nke nwere ikike ị were ụlọ ọgwụ 35 kwa ụbọchị ma nwee ọrụ ịwa ahụ 500, nwere ụlọ 725 polyclinic na ụlọ 3 na-arụ ọrụ, 90 n'ime ha bụ ngwakọ. Başakşehir Çam na Sakura City Hospital, nke ga-arụ ọrụ na ngalaba 107, nwere ọrụ mberede 4 dị iche iche: Okenye, Nwa, Nsogbu na Maternity.
OSBOSR H AHILL AHILL GA-EBURU OZI NA 107B 4R XNUMX XNUMX, Ma Ọ B XNUMX XNUMX NA-AKWATEKWỌR EM EGO EMERE.
Ebe ime ụlọ 725 dị, 3 ime ụlọ, arụ ọrụ 90 n'ime ha bụ ngwakọ, ụlọ ọgwụ nwere ike ịnabata 35 puku ndị ọrịa kwa ụbọchị na ịrụ ọrụ 500-akọwapụtara. Hospitallọ ọgwụ, nke ga-arụ ọrụ na ngalaba 107 maka ụmụaka na ndị okenye, na-enye ngwaọrụ nyocha na akụrụngwa ọgwụ kachasị elu na akụrụngwa ọgwụ. Başakşehir Çam na uralọ Ọgwụ Sakura City nwere ọnụ ụlọ 456, mmadụ iri isii na anọ n'ime isii bụ ụlọ akwa na-elekọta anya. Enwere ọrụ mberede 2 dị iche iche, gụnyere Okenye, Childmụaka, Nsogbu na Maternity, n'ime mpaghara mechiri emechi nke 682 puku square mita. Enwere ebe nlere anya 30, ebe enwere ụlọ nrụgide na-adịghị mma na ebe enwere ike ịnye ọnọdụ nlekọta nlekọta mberede, na ngalaba mberede, nke nwere ngalaba nchọpụta na ọgwụgwọ iji opekata mpe ndị ọrịa 4 kwa ụbọchị.
Gini mere eji akpọ ụlọ ọgwụ aha Sakura? Citizensmụ amaala bidoro nyochawa nghọta Sakura nwere ịmata ihe. Keduzi ihe Sakura pụtara, kedu ihe kpatara aha ụlọ ọgwụ ọhụrụ emepere Sakura?
G DONES KA SAKURA Pụtara?
Turkish, nke bụ okwu Japanese, pụtara “Cherry Blossom”. Sakura bụ ụdị "Osisi udara" nke na-adịghị amị mkpụrụ. O bu ifuru nke osisi obula nke Prunus. Sakura dị ezigbo mkpa na omenala ndị Japan ma bụrụ otu n'ime akara mba nke Japan.
Ifuru a na-emepe n’izu ikpeazụ nke Mach na izu mbụ nke Eprel, na Japan, a na-ahụta oge dị ka ihe dị nsọ. Nke mere na enyere na "Ọnọdụ Sakura" mgbe ihu igwe gachara. Oge a mgbe okooko osisi ifuru bụ oge mgbe ndị Japan na-anabata ndị njem nleta kachasị
GN WAS mere enyere aha SAKURA ji nye onye nwe mmiri?
Onye isi ala Recep Tayyip Erdoğan kwuru na nkwupụta na Mọnde: “Anyị akpọwo ụlọ ọgwụ a Başakşehir Çam na Sakura City Hospital. Anyị kwuru na Pine kwesịrị ịnọchite anya anyị. Sakura kwuru Japan. ”
Oge mbu nke ulo ogwu mepere n’April 20. Taa ndị nke ọzọ ga-abata ọrụ.
Ndị na-ewu ụlọ ọgwụ malitere iwu na osisi ahụ na 2016 dịka ozi dị na saịtị Renaissance Holding, nke Ministri Ahụike gosipụtara na Onye Mmekọrịta Onwe Onye Ọchịchị na-arụ ọrụ bụ atụmatụ nke atọ kacha ukwuu na ahụike Turkey.
Hospitallọ ọgwụ ahụ, nke nwere mpaghara nke 1 nde square mita, nwere akwa 2 puku 354 na akwa 456 na-elekọta anya.
Mayor Kadir Topbas: Kwuo Anyị bụ Metro
Kedu ihe mgbochi Ịdọ Aka ná Ntị Mgbochi Metro Na-enweghị Nzuzo Pụtara?
Mgbanwe ahụ na Ụgbọ njem GPS na igwefoto na-abịa, ya mere, gịnị ka ọ pụtara?
Ihe ụgbọ njem na ememe dị elu na-egosi Bursa
Binali Yıldırım: Enweghị isi na ụgbọ ala mgbe Marmaray
Ndị ọrụ YHT na-ekele maka ịdọ aka ná ntị ịkwụsị
Merging nke TÜDEMSAŞ, TÜLOMSAŞ na TÜVASAŞ
Başakşehir Çam na Sakura City Hospital mepere
Oge GPS na Igwefoto na njem ụgbọ njem amaliteziri Gịnị Ka Ọ Pụtara?
Kedu ihe ị pụtara na Keçiören Metro akwụsịla?
Ịdị ike na Konya pụtara ịbụ onye siri ike na Sarajevo
Ụgbọ okporo ígwè pụtara ike na nnwere onwe
Nhazi aha pụtara ọdachi nchịkwa!
Ezigbo ụgbọ mmiri na-achọghị ịkwụ ụgwọ n'okporo ụzọ
Onye Minista Pekcan na-akpọsa ngwa ọrụ ọhụrụ na Nkwado ikuku
TİGEM Ceylanpınar Igwe Ọgba mmiri na-aga Ndụ Echi
Ndị otu na International Air Student Exchange Organisation (IACE)
Taa na History: 1 June 1957 Miniature 2 ụgbọ okporo ígwè na Ankara Youth Park
Ọnye na-bụ Murat Dilmener
Ụgbọ ala na-abịa n'ụsọ osimiri
Ụgbọala Cable Na-abata na Inkumu Beach
Ụgbọ elu na-abịa Babadaga
Ụgbọaka Harputa Cable Na-abịa
Ụgbọ ala Cable dị n'etiti Europe na Eshia